Soda yekubikisa | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Posts tagged "Soda yekubikisa"
Home-Based Nzira kuzvichenesa zvikadaro Mazino
sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako
Kuva yakanaka kupenyerera peya mazino hope wose chero bedzi imi munoziva sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Unogonawo kuita kuti mazino enyu chichiwedzera akachena aine mazino rakanga rachena Kit kana mazino kurapa. zvisinei, rakanga rachena mazino kutevera chero nzira idzi kazhinji kunodyira yakawandisa kuti vakawanda havakwanisi kuzvitenga. Uyezve, Nzira idzi havasi kupa yakanakisisa uye vazhinji vaida mugumisiro. Kunze pamusoro-the-pakaunda meno zviitwe Kits uye anodhura mazino kuvhiyiwa, imi mune rimwe nezvechisarudzo sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako kuti kunokubatsira kuwana chidodzi isina, pearly mazino machena pasina kuisa mutoro kuwana pauri. Uchakwanisa kuziva sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino enyu uchishandisa musha mazino rakanga rachena nzira. Home mazino rakanga rachena nzira vanowanzoshanda zvinobudirira pane dzimwe nzira. Kuwedzera kuti, musha-kwakavakirwa unyanzvi mari iwe zvishomanana kuti unogona zvirokwazvo kutenga. Pazasi inzira sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako munzvimbo kutengeka mutengo.
Soda yekubikisa rinowanika mukicheni kusvika ose imba uye anobatsira sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Vanhu vanoshandisa kubikira pasoda somunhu tastemaker. Baking mushaba unoshandiswawo kuti okuchenesa zvinangwa. Zvinoshanda zvinobudirira kubvisa kunzwa kwakanaka kubva mufiriji. Unogona kushandisa kubikira pasoda rokuchenesa mazino ako. Kubika mushaba zviri hasha zvakasikwa uye aya kunokubatsira kubvisa vara kubva wejira pamusoro mazino ako. Nezino zviitwe, tora nendiro pasoda, vashoma donhwe remvura uye nyoro bristled munyoro chikwesheso. Tora soda muruoko rwako uye kuwedzera madonhwe emvura pazviri kuti namatidza nayo. Zvino anyike chikwesheso kupinda namatidza uye kukwesha mazino enyu. Unogona kutevera nzira iyi sezvo zvikuru sezvo kamwe vhiki imwe neimwe.
Pane zvimwe zvibereko vabatsire sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako; asi mastrawberry kushanda zvakanaka kuitira kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Zviri imwe nyore, inobudirira uye kudhura musha mazino zviitwe Kits. Strawberry rine malic asidhi sezvo chinoshingaira chirungiso. Izvi makemikari chirungiso zvinobatsira pane sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako kuti usunungure echitema pachiso kwemeno. For Tinonyanya, unogona kushandisa kubikira pasoda pamwe mastrawberry. Cheka rimwe svikiro kadikidiki waibva Strawberry zvidimbu zvidiki uye tora zvidimbu ari mbiya. Mobva hafu yamashekeri pasoda kuti muchero naMashi musanganiswa aine forogo kuti zvainoitawo zvakanaka kana rikawana kusvikira pulpy kusachinja-chinja. Zvino kushandisa muvhenganiswa ichi pamusoro mazino wako chikwesheso uye kumirira kwemaminitsi mashoma. Zvadaro sukurudza muromo wako zvakanaka pachena mvura. Unogona kuita izvi kamwe dzose vhiki.
Ndiyo imwe nzira yakanaka sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako kumba. Mudzimba zhinji, rinoshandiswa disinfect akuvara zvenhando anokwenya. Inogona kushandiswa kwazvo mazino whitener. toothpastes Most zvinodhura ane peroxide sezvo guru chirungiso. Unogona kurishandisa somunhu mouthwash uyewo meno whitener. Tora mukombe chete nemana peroxide mumuromo mako uye gurgle inenge imwe miniti. Zvadaro sukurudza muromo wako kwazvo pamwe pachena mvura. Kukwesha mazino enyu pashure kushandisa peroxide kuwana nani kushanda. Unogona kushandisa peroxide kamwe zuva nezuva kuti ndiwane vazhinji aitarisirwa mugumisiro.
Posted by kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide - Chikumi 4, 2016 pa7:25 AM
Categories: Home Based kuna kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tags: Soda yekubikisa, sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako, mazino chichiwedzera, kuzvichenesa zvikadaro mazino ako